Teknolojia – Imahaka
imahaka	dans Uncategorized	 avril 3, 2014 151 Words
Ny 80 isan-jataon’ny tanora mamonjy cyber dia mitsidika site de rencontre avokoa. Mpifanakatia roa isaky ny herinandro kosa ny miahaona vokatry ny fanelanelanana ataon’ny ivon-toeran-tserasera mampihaona mpifankatia iray eto ndrenivohitra. Nitombo isa izy ireo amin’izao ankatoky ny fetin’ny mpifankatia izao.
Maro samihafa ny fomba ihaonana ka mahatonga ny olona hiaraka. Any an-tsekoly, anaty fiakambanana, any ampiangonana, eny anivon’ny toeram-piasana, fiarahamonina, fety isan-karazany. Fa eo ihany koa ireo site Internet, izay mahasarika ny olona amin’izao fotoana izao.
Maharitra ela araka izany vao mifankahita mivantana ireo olona mifankahalala amin’ny alalan’ny site internet. Raikitra amin’ny asa, mifanalavitra, mbola tsy mifanakafantatra. Ny mifanohitra amin’izany ny zava-misy amin’ireo mpanelanelana raha ny fanazavana azo.
20 hatramin’ny 70 taona ny olona tonga misoratra anarana amin’ity ivon-toerana iray mikarakara mpifankatia ity. Antony maro no mahatonga ny olona hanatona mpanelanelana toy izao raha hitady olon-tiana. Amin’izao ankatoky ny fetin’ny mpifankatia izao, maro ireo olona miaraka, fa tsy latsak’izany koa ireo misaraka.
Antananarivo sy ny fianana andavanandro